Filankevitry ny fampihavanam-pirenena : Ireo heverina hilatsaka ho Filoha -
AccueilRaharaham-pirenenaFilankevitry ny fampihavanam-pirenena : Ireo heverina hilatsaka ho Filoha
Filankevitry ny fampihavanam-pirenena : Ireo heverina hilatsaka ho Filoha
08/09/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Hatreto dia mbola miandry ny fianianana izay hotanterahin’ ireo mpikambana miisa33, izay vao fantatra vao haingana teo ny anaran’izy ireo, ny mpanara-baovao. Raha ny fantatra mantsy dia miandry ny fiverenan’ny Filoham-pirenena eto an-tanindrazana ny fanatanterahana io lanonam-pitsarana io. Eo ampiandrasana izany rehetra izany ihany koa dia efa miomana amin’ny fandrafetana ny birao izay handrafitra ity andrim-panjakana ity ny mpikambana rehetra, betsaka rahateo ny anarana izay mandehandeha amin’ izao fotoana izao fa hirotsaka ho eo amin’ny toeran’ny filohan’ny CFM. Hatreto dia miisa efatra ireo anarana izay efa fantatra, fa vonona hirotsaka ho filohan’ny CFM ka anisan’izany ny solontenan’ny mpanao gazety, i Maka alphonse, ny praiministra tamin’ny andron’ i Ravalomanana, ny jeneraly Charles Rabemananjara, Mangalaza Eugène, Miandrisoa Jean Marcel, saingy hatreto dia mbola tsy nisy nanatitra antontan-taratasy firotsahana izy ireo .
Mazava tsara ny voalazan’ny lalàna tamin’ny fifantenana ireo mpikambana 22 manerana ny faritra fa tsy afaka mirotsaka ireo izay mpikambana ao anatina antoko politika, ary ekena tokoa fa tsy mpikambana ao anaty antoko avokoa ireo anarana voalaza ireo. Raha jerena anefa ny tantara dia tsy mpikambana amina antoko izy ireo, fa kosa mpiray ombona antoka amina antoko. Raisina ohatra izany jeneraly Charles Rabemananjara izany, izay iaraha-mahalala fa praiminisitra tamin’ny andro nitantanan’i Ravalomanana ary niara-nianjera taminy. Mangalaza Jean Eugène izay ekena ihany koa fa tsy ao anatin’ny antoko AREMA saingy rehefa nisy ny fifanarahana noho ny krizy ny taona 2009, ary nisy ny fanolorana praiminisitra teo amin’ ireo filoha efa-tonta nivory tany Addis-Abeba dia i Mangalaza Jean Eugène hatrany no nasesiky ny Amiraly . Miandrisoa jean Marcel, izay tao anatin’ny delegasionin’ny profesora Zafy Albert hatrany tamin’ny fifanarahana , tamin’ny famahana ihany koa ny krizy 2009. Maka Alphonse, izy indray dia mpanao gazety ary efa mpikambana tao amin’ny FFM ny taona 2014 , ary talen’ny kabinetra ihany koa , tsy hohadinoina fa anisan’ny nanatevina ny komity amin’ny famolavolana ny lalàna hananganana ny rafitra ihany koa ity mpanao gazety ity .
Firaisan’ireo kandidà : Ho eny amin’ ny hcc androany
Taorian’ny famoahan’ireo kandidà ny fanambarana iraisana, nandritra ny fivoriana notanterahin’izy ireo niaraka tamin’ ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana. Fantatra izao fa hanatitra ny fanambarana iraisana eny amin’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana ireo ...Tohiny
Ravalomanana, Lalatiana, Rajoelina : Fitiavan-tena sy famitaham-bahoaka